Bangaki Abantu Abangabukela iDisney + ngasikhathi sinye? - Ungakwenza Kanjani
IDisney Plus ingelinye lamapulatifomu amasha asakazwa kakhulu kwi-inthanethi. Banikela ngokuqukethwe kwekhwalithi yabasebenzisi ngamanani aphansi.Ungajabulela izindaba ezinhle, ama-movie nezinhlelo ze-TV endaweni yesikhulumi. Ukubhaliselwa okufanele ube nakho kubasebenzisi abajabulela ukubuka amathani wokuqukethwe. Sincoma ukuthi uzame i-Disney platform yabo emangalisayo namuhla.
Ukusakaza kuyabiza, futhi abantu abaningi babelana ngama-akhawunti kulezi zinsuku. Umbuzo womkhawulo womsebenzisi ufika engqondweni noma nini lapho ubhalisela insizakalo enjalo. Ukwabelana nge-akhawunti yakho kudinga ukuzibophezela okuningi. Kulesi siqondisi, sizobheka ukuthi bangaki abasebenzisi nge-akhawunti ngayinye abavunyelwe i-Disney.
Ukwehlukaniswa Kokusetshenziswa Komsebenzisi Ne-akhawunti yeDisney Plus:
Ukwethulwa kwawo wonke amapulatifomu ahlukahlukene okusakaza kanye nezinsizakalo zawo ngamanani ancintisana kakhulu nokuqukethwe okuyingqayizivele kube ukukhetha okuzuzisayo phakathi kwazo zonke izinhlobo ezahlukahlukene zabathengi laphaya. Manje, ukungakwazi kwethu ukujabulela ama-movie ngokomzimba ezinkundleni zemidlalo yeshashalazi kunikeze imboni yokusakaza online amandla amaningi kunanini ngaphambili.
Zonke lezi zinsizakalo ikhono eliphansi kakhulu iseduze nensimu engashintshiwe abayinikeza bonke ababelana ngama-password phakathi kwethu.Manje umbuzo uwukuthi, ingabe sivunyelwe ukwabelana ngamaphasiwedi we-akhawunti yethu ye-Disney Plus?
Buka i-Disney Plus ku-Roku
Ulwazi lwe-Disney + ne-Akhawunti Yomsebenzisi:
Impendulo emfushane ithi 'yebo'. IDisney Plus yindawo enhle yokwabelana nge-akhawunti yakho nokuzijabulisa.Ungahlukanisa umthethosivivinywa nabangane bakho futhi unciphise izindleko. Lapho sicubungula isimo samanje, abantu abaningi abenzi kahle impela kwezomnotho. Ukubhaliselwa kwanyanga zonke kuyisidingo, futhi iningi lethu lisebenzisa isikhathi sethu ekukhiyweni ngokweqile ngokubonisa ukuzitika ngocansi.
Ngokwesivumelwano Sokubhaliselwe seDisney,'Kuze kufike kane (4), imifudlana efanayo iyavunyelwa ku-akhawunti ngayinye ye-Disney + nganoma yisiphi isikhathi.'Singakha futhi amaphrofayli afinyelela kwabayisikhombisa.
Ungabelana nge-Akhawunti Yakho Nabangani?
IDisney iyathandeka ngokwabelana ngamaphasiwedi, kepha kunemikhawulo ebonakalayo nemikhawulo yokwakha indlela ephelele yokusakaza okunempilo nokukhumbula.
Ngenkathi abasebenzisi bangaba nokufika ku-Isikhombisaabasebenzisi abahlukene ababelana nge-akhawunti efanayo ku-Disney Plus ngokubhaliselwe okufanayo kwenyanga kwe- $ 6.99, amanye amadivayisi amane kuphela nganoma yisiphi isikhathi angasebenza ngokuzimela nangokugcwele. Kusho ukuthi uma abasebenzisi banabantu abayisikhombisa emndenini wabo abafuna ukubuka izinto ezihlukile, abakwazi. Ama-akhawunti womsebenzisi amathathu kuzodingeka alinde.
Ithini imithetho esemthethweni?
Umongameli weDisney Streaming Services uMichael Paull unethemba lokuthi abathengi bazosebenzisa ipulatifomu ngokuzibophezela ngokukhokha u- $ 6.99 ngenyanga. Kodwa-ke, uyazi futhi ukuthi abantu babelana ngama-password abo ngaphandle komndeni ukusizakala ngamakhono amane okusakaza.
Ubuye wengeza ukuthi ukuvinjelwa kobuchwepheshe kuthathiwe ngemuva ukuze kuqondwe indlela abathengi abaziphatha ngayo. Ithimba lobuchwepheshe libukeka ligcina isheke elijwayelekile kuma-akhawunti ngabasebenzisi abaningi. Kuyindlela yokugwema abaduni nokunciphisa amathuba okuvuza kwedatha.
Ungayibhalisela kanjani iDisney Plus
Inqubo ye-Disney Plus Sign Up ilula impela. Abasebenzisi bangalandela umhlahlandlela onikezwe ngezansi futhi bajabulele ukuzijabulisa okungenamkhawulo.
Abasebenzisi bangaqala ngokuvakashela iwebhusayithi esemthethweni yeDisney Plus. Ungachofoza kulokhu isixhumanisi, itkuzokusa ekhasini lokubhalisa ngqo.
Kufanele ungeze ikheli le-imeyili kuwebhusayithi. Kuyadingeka ukuthola lonke ulwazi mayelana nensizakalo yokusakaza kanye nezikweletu zakho. Uzothola nokunikezwa okuningi nezinzuzo ezivela kwaDisney njalo.
Kubalulekile ukukhetha iphasiwedi ephephile. Ungasebenzisa inhlanganisela noma umakhi wephasiwedi ukuthola umphumela ophephe kakhulu. Iwebhusayithi futhi ikunikeza umbono uma iphasiwedi yakho iqinile.
Isinyathelo sokugcina ukukhokhisa ukubhalisa kwakho. Abasebenzisi bangangeza imininingwane yabo kusayithi. Ungakhokha ngokushesha usebenzisa ikhadi lesikweletu noma i-PayPal njengendlela elula. Ungabhalisela futhi ukubhalisa minyaka yonke. Kuzokusiza ukuthi ugcine imali eningi kokubhaliselwe.
Lezi yizinyathelo ongazilandela ukubhalisela ipulatifomu yewebhusayithi. Sincoma ukuthi udlule kukho bese uqala ukusakaza namuhla.
Ukubhaliswa kweDisney Plus kukulethela uhlu olukhulu lwezici. Kulo mhlahlandlela, sizobheka ezinye zezinketho ezinhle kakhulu ezitholakalayo kithi. Ungajabulela iDisney Plus ngokubhalisela insiza namuhla. Nazi izinzuzo abasebenzisi abazothola uma bethenga ubulungu be-premium.
1. Iqoqo leqembu
Ukubuka ama-movie bekungafani ngo-2020. IDisney Plus ingelinye lamapulatifomu anikezela ngezici zokubukwa kwamaqembu. Abasebenzisi bangakwazi bukela ama-movie nabangani babo nomndeni ndawonye. Iletha wonke umuntu ndawonye futhi isenze sazise izinto ezincane. Ilungele labo abajabulela ukusakazwa okuningi. Abasebenzisi bangasakaza nabangani abangafika kwabayi-6 ndawonye.
2. Ama-Original Original
Kunamathani emidlalo emisha endaweni yesikhulumi. Abasebenzisi bangabelana ngobumnandi nabangane babo.Yipulatifomu ekahle yokusebenzisa kwakho. Sincoma ukuthi uzame namuhla futhi uhlole okuningi. Okwangempela kwakamuva kufaka imibukiso evela kuMarvel, Lucasfilms, nasePstrong. Siyamthanda uMandalorian. Futhi izophuma kungekudala ngesizini 2.
IDisney Plus ayilethi izikhangiso etafuleni. Ungasakaza yonke into ngaphandle kokukhathazeka ngokuphazamiseka. Ilungele labo abafuna isipiliyoni sokusakaza esingenamandla. Izitudiyo ezinkulu zama-movie zinokuqukethwe kwazo kuwebhusayithi. Okhethekile kweDisney plus nakho ukubona kwamehlo abuhlungu. Ungakwazi londoloza okuningi ngokuthenga okubhaliselwe kwenqwaba .
Lezi ngezinye zezinketho ezinhle ezitholakalayo zabasebenzisi beDisney kanye nabasebenzisi.
Izindlela zokuthatha ezisemqoka ezivela kuDisney Plus:
Kulesi sigaba somhlahlandlela weDisney Plus, sibheka izikhombisi eziphezulu bonke abasebenzisi okufanele bazi ngazo ngenkathi besakaza. Izokusiza ukuthi ube nesikhathi esilula ngenkathi usakaza okuqukethwe. Nawa ama-takeaways angukhiye azoba lusizo ngezidingo zakho zokusakaza.
Abathengi bangabuka i-Disney Plus kusuka kumadivayisi amane ahlukene ngasikhathi sinye.
Inani lamaphrofayela akwi-akhawunti yakho alilingani nenani lemifudlana ngasikhathi.
Ukuhumusha kuma-akhawunti ayisikhombisa akulingani nemifudlana eyisikhombisa ngasikhathi sinye. '
Isigaxa sedivayisi ezine siqinisekisa indlela yokusakaza enempilo nenengqondo ngenkathi kuqondwa amaphethini ahlukahlukene abathengi ngenkathi kuvinjelwa ukuhlukunyezwa kwe-Akhawunti Yomsebenzisi.
Inani lamadivayisi angasakaza iDisney Plus ngasikhathi sinye liphakeme kunamapulatifomu alo okusakaza izimbangi njengeNetflix, iHulu, nePrime Video.
Ayikho imikhawulo yenethiwekhi yasekhaya noma ye-inthanethi. Kukwabiwa okungaxhumi kwe-akhawunti eyodwa kumndeni ofanayo noma kusabalale ezweni lonke. Abasebenzisi okwamanje bangabuka umtapo wezincwadi ophelele weDisney Plus kuzinhlelo zabo zokusebenza zeselula zamafoni namaphilisi.
I-Disney Plus vs. Umncintiswano:
Uma kuqhathaniswa nazo zonke izinsizakalo zokusakaza eziyinhloko laphaya nezikhulu ezibonakala zomdlalo njengoHulu, iNetflix, i-Amazon Prime, i-HBO Max nezinye izinsizakalo ezikhulayo, iDisney Plus ibamba onqenqemeni ngentengo yayo engabizi kakhulu engu- $ 6.99 ngenyanga, ephansi kunazo zonke yazo zonke izinsizakalo ezikhona laphaya. Futhi, ayilingani nanoma yiluphi uhlelo lwe-tier njenge-Hulu ne-Netflix. Ngakho-ke abasebenzisi abashiywa bezizwa befuna.
Uhlelo lokubhalisa olulodwa nolufanayo lunikeza abasebenzisi ukusetshenziswa okungenamthungo kukonke.
Inani lamaphrofayli liphakeme kakhulu phakathi kwazo zonke izinsizakalo zokusakaza.
Futhi, inani lamasheya wesikrini lingaphambili uma kuqhathaniswa nezimbangi zalo.
NjengeNetflix, awekho amandla okusakaza asuselwa esigabeni. Kusho ukuthi abasebenzisi badinga ukukhokha imali ethe xaxa ukuthola izici eziningi.
IDisney Plus inikela ngokubhaliselwe okukodwa ukuvula konke ngo- $ 6.99 ngenyanga. Abasebenzisi abaphoqiwe noma baxhashazwe ukukhokha ngaphezulu ukuze bathole okuningi.
Futhi, Inani Lokubhalisile liphansi kunazo zonke izimbangi zalo laphaya. Futhi izinzuzo ezilethwa yiNdlu yeMouse kubasebenzisi bayo azikho mingcele.
I-Disney Plus ine-Directory Directory yokuqukethwe nokuningi okuningi. Inikeza okuhlangenwe nakho okuzuzisa futhi okufanelekile kubasebenzisi bayo. Sekukonke, indlela egxile kubathengi kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi okunobungane kunqenqemeni olukhulu kunabaqhudelani bayo abathanda inzuzo.
Amandla okuba namaphrofayili ahlukene ayisikhombisa ngaphansi kwe-akhawunti eyodwa futhi amane ngasikhathi sinye ukuhlolwa aphakeme kakhulu phakathi kwazo zonke ezinye izinsizakalo.Sekukonke uma ucabanga ukuthola isipiliyoni seDisney Plus, ungacabangi kabili, ngoba isenzakalo esobala ngokuphelele futhi siyazuzisa.
Yenza kusebenze isilingo samahhala seDisney Plus